..Igadi kaLino ..
Ifama sinombuki zindwendwe onguDaniele
I-villa eneempawu ezahlulahlulwe zaba ngamagumbi amabini angqongwe buhlaza kwindawo yobuchule isiqingatha seyure ukusuka kwezona zixeko zihle kakhulu eTuscany (Lucca Florence Chianti) kunye nemizuzu eyi-15 ukusuka ePistoia kunye ne-10 ukusuka eDynamo Camp. Indawo ezolileyo ilungele zombini iintsapho kunye nabantu abancinci, isandula kulungiswa. Isidlo sakusasa sifakiwe.
Igumbi elizimeleyo elinomnyango wabucala, igumbi lokuhlala, ikhitshi, igumbi lokutyela, igumbi lokulala eliphindwe kabini, igumbi lokuhlambela kunye ne-terrace enkulu enokuthi ibambe abantu aba-5. Iindwendwe ziya kuba nokufikelela kuzo zonke izinto ezithuthuzelayo zendlu ngokuzimela okupheleleyo. Igadi yabucala, ukufikelela kwidama lokuqubha, ekwabelwana ngayo kuphela nenye indlu, iJacuzzi eshushu, i-barbecue, i-oveni ye-pizza, indawo yokupaka evaliweyo, i-Wi-Fi yasimahla, indawo yokuhlamba impahla. Ngokunokwenzeka kokufikelela kwinkundla ye-tennis.
Baza kukwazi nokuthatha inxaxheba kwimisebenzi ye-COOKING SCHOOL kunye ne-WINE TASTING esiyiququzelelayo.
1 ibhedi elala abantu ababini, \_u00A0Ibhedi yomntwana eyi-1, \_u00A0Ibhedi yosana eyi-1, Ibhedi encinci eyi- 1
Ujikelezwe nguhlaza unokunandipha ukuhamba kakuhle kwiintaba zethu ezintle, ukhangele amakhowa kunye namajikijolo. Okanye uhlale ecaleni kwedama ukonwabela iziqhamo zegadi yethu uphumle ngokupheleleyo kude nobushushu kunye nesiphithiphithi sesixeko. Amanyathelo ambalwa emva kokulandela iindlela ze-CAI uya kufumana i-oasis ye-WWF, iparadesi engangcoliswanga. Phakathi kwezinto onokuzibona kukho imyuziyam ye-SMI kunye neegalari zayo eziphantsi komhlaba. Ebusika yindawo ebalaseleyo yokufikelela kwi-ski slopes ye-Abetone kunye neVal di Luce. Ukuba ufuna ukutyelela izixeko, unokufikelela ngokulula eFlorence naseLucca, ngemoto nangebhasi ukusuka apha okanye ngololiwe ukusuka kwisikhululo esikufuphi sasePistoia, naseBologna ngololiwe othe ngqo osuka kwisikhululo sendawo sasePracchia.
Siya kuba khona xa singena n, kodwa asiyi kubakho endlwini ukuze singaphazamisi iindwendwe eziya kukwazi ukusifumana amanyathelo ambalwa kwindlu elandelayo ngokuwela igadi.